के सेक्स शारीरिक कसरत हो ? सेक्स गर्दा के हुन्छ शरीर र दिमागमा
ramkrishna July 17, 2020	के सेक्स शारीरिक कसरत हो ? सेक्स गर्दा के हुन्छ शरीर र दिमागमा
हाम्रो समाजमा अझैपनि सेक्सका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सकिदैन् । तर, सत्य के हो भने नियमित सेक्स स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण पाटो हो । सेक्सले ब्लड प्रेसर कम गर्छ र कोलस्ट्रोलमा पनि सुधार हुन्छ । सर्वेक्षणका अनुसार नियमित सेक्सले हर्टअट्याक अर्थात हृदयघात र स्ट्रोकको सम्भावनालाई ५० प्रतिशतले कम गर्छ । जो मानिस नियमित सेक्स गर्छन उनीहरु कम विरामी हुन्छन् । सर्वेक्षणका अनुसार नियमित सेक्स गर्दा मानिस शारीरिक रुपमा मात्रै नभई मानसिक रुपमा पनि स्वस्थ रहने उल्लेख छ ।
Previous Previous post: लकडाउनमा श्रीमानले जतिबेला पनि यौनका लागि दबाब दिएको भन्दै महिलाले प्रहरी गुहारिन्
Next Next post: वाईफाई स्लो भयो ? स्पीड बढाउन यसो गर्नुहोस्